Dagaal Culus oo Ka Socda Gobolka Lamu Kenya iyo Al Shabaab oo La Wareegay Deegaanka Pandanguo.
Wednesday July 05, 2017 - 11:26:24 in Wararka by Super Admin
Wararka ka imaanaya wadanka Kenya ayaa sheegaya in dagaallo culus ay ka socdaan gobolka Xeebta ku teedsan ee Lamu.
gobolka Lamu waxaa ka dhacay weeraro soo noq-noqday
Saraakiisha booliska Kenya ayaa sheegay in xoogag aad u hubeysan oo katirsan Xarakada Al Shabaab ay weerar qorshaysan ku qaadeen saldhig boolis iyo xarun dowladeed oo ku taal deegaanka Pandanguo.
War rasmi ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu weerar qorshaysan ku qaadeen deegaanka islamarkaana ay la wareegeen gacan ku heynta Pandanguo iyo dhammaan saldhigyadii booliska iyo xarunta maamulka.
"Ciidamada Mujaahidiinta ayaa howlgal adag ka wada gobolka Lamu ee gudaha Kenya, muslimiinta waxaan ugu bishaareynaynaa in lala wareegay deegaanka Pandanguo iyo saldhigyadii ay ku sugnaayeen ciidamada saliibiyiinta Kenya sidoo kale waxaa jira gaadiid ay mujaahidiintu soo ghamiineysteen" ayaa lagu yiri war kasoo baxay Al Shabaab.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in iska hor'imaadyo xooggan ay dhaxmarayaan ciidamada Booliska iyo Melleteriga Kenya oo isku dhinac ah iyo ciidamada Al Shabaab, dad goob joogayaal ah waxay sheegeen in ay arkayeen daaalyahanno hubeysan oo dhax roondeynaya deegaanka.
Taliyaha booliska gobolka Lamu Col. Akello Odhiambo ayaa xaqiijiyay in weerar xooggan lagu qaaday deegaanka Pandanguo isagoo hadlayay ayuu yiri "wax tafaasiil ah hada mabixin karo sababtoo ah ciidankeena ayaa dhulka ka dagaallamaya".
Warbaahinta maxalliga Kenya waxay sheegtay in xoogaga weerarka qaaday ay la wareegeen saldhigga booliska islamarkaana ay weerar ugeysteen xarun kale, jugta madaafiic iyo rasaas xooggan ayaa laga maqlay goobta dagaalka.
Gobolka Lamu wuxuu kamid yahay meelaha ugu daran ee dagaalladu ay ka socdaan, ciidamada melleteriga iyo kuwa Booliska Kenya ayay ku adkaatay in ay ka hortagaan weerarada uga imaanaya dhanka Xarakada Al Shabaab.